No word for goodbye ~ Nge Naing
Friday, September 03, 2010 Nge Naing 14 comments
the moon rise,
a life gone,
while we mourn,
shall not worry,
but, we are sorry
Died by cancer
doctors couldn't find an answer
its likeagun
making your loved ones numb
but worst your still young
the angles say hi,
but we still aren't ready to say bye,
(For Miss Salhani who had gone on 3/9/10)
အကြွေစောလို့ ကျွန်ုပ်တို့ ငိုကြွေးချိန်မှာ
သို့သော် ကျွနုပ်တို့ ၀မ်းနည်းမဆုံးပါ။
သင့်ကို ချစ်ခင်သူတွေကို အံ့သြသင့်စေခဲ့ပြီ
အဆိုးဆုံးက သင်နုပျိုဆဲမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
သင့်အား ကောင်းကင်တမန်တွေက လှမ်းနှုတ်ဆက်ချိန်မှာ
ကျွန်ုပ်တို့မှာ သင့်ကို လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ။
တိုးနန္ဒ (၆ တန်း P)
သားသားတို့ကျောင်းက ဆရာမတဦး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ညကကွယ်လွန်သွားလို့ တနင်္ဂလာနေ့ကျရင် သူတို့ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေ ဆရာဆရာမတွေက ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုကို ၀မ်းနည်ကြောင်း Message တွေ ပို့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ပုံဆွဲတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း ပုံဆွဲပြီး တခြား Creative လုပ်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း သူတို့သန်ရာကို ဖန်တီးပြီး ပို့ပေးကြမယ်လို့ သိရတယ်။ သားကတော့ ဒီကဗျာလေးကို ကဒ်ထဲမှာ ရေးပြီးပို့ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်မလည်း အလုပ်များလို့ စာရေးမအားတာနဲ့ သူတို့ဆရာမအတွက် သားရေးထားတဲ့ ၀မ်းနည်းကြောင်း ကဗျာလေးကို မျှဝေခံစားပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ထားတာ မပြည့်စုံပါဘူး။ အားနည်းပါက ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုပ်ချမှု မလုပ်ဘဲ ဘယ်သူမဆို အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြာရောင်နဲ့ တပိုဒ်ကို ထပ်ဖြည့်ထားတာ ဖြစ်ပြီး သားတို့ကျောင်းမှာ လုပ်မည့် ၀မ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားလုပ်ရင် သားက သူ့ကဗျာကို ရွတ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Posted in: ကဗျာ,ခံစားမှု,ပညာရေး,သားသား
September 3, 2010 at 8:49 PM Reply
September 3, 2010 at 9:53 PM Reply
September 3, 2010 at 11:07 PM Reply
ညီမကတော့ သားလေးအရွယ်တုန်းက မပြောနဲ့အခုအချိန်ထိတောင် အဲ့ဒီလိုမရေးတတ်သေးဘူး၊၊
အခုတလော သေတာတွေဘဲကြားနေရတော့ စိတ်မကောင်းတွေဘဲဖြစ်နေရတယ်၊၊ ညီမလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်တော့သေမလဲဆိုပြီး အခုတလော ပုတီးစိတ်၊ တရားထိုင် တော်တော်လေး လုပ်ဖြစ်ပါ တယ်၊၊ တကယ့်တကယ်က ကိုယ့်မှာ ကောင်းတဲ့ အထုတ် မထုပ် ရသေးခင် သေသွားရင် နောင်ဘ၀မှာ ကြောက်စရာမလား၊၊
အမသားက ကဗျာရေးတာ တော်လိုက်တာ။
September 4, 2010 at 1:02 AM Reply
Great :) His original is better :)
September 4, 2010 at 6:07 AM Reply
September 4, 2010 at 7:56 AM Reply
September 4, 2010 at 1:14 PM Reply
လာလည်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပြန်လည်မအားသေးတာ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားကြပါနဲ့။ နောက်ပတ် ဒီလိုချိန်ဆို ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ပြန်လည်လို့ ရပြီ။ သားကို တော်ကြောင်း ချီးကျူးကြတာ ကြားရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက ကဗျာဖတ်မတတ်တော့ တကယ်တော်မတော်ဆိုတာ မသိပါဘူး။
P, မောင်လေး၊ ကိုအောင်၊ မချစ်ကြည်အေး- ကဗျာ label အောက်မှာ သားရေးထားတဲ့ တခြားကဗျာ နှစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်။
မညို သားနာမည်က ကျွန်မပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုန်းကြီးပေး ထားပေးတာ ကျွန်မတို့က အရှေ့ဆုံး တိုး တလုံးကိုပဲ သုံးပါတယ်။
အန်ကယ်နိုင် ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး အိမ်မှာ ကျွန်မကလွဲရင် သားအဖနှစ်ယောက်က အနုပညာရှင်တွေ သူ့ထက်ငါ လူစွမ်းကောင်းတွေပဲ အပြိုင်အဆိုင်နဲ့။ အိမ်မှာ သီချင်းတိုက်တာ သားနဲ့အဖေက တလှည့်စီ ဖြစ်နေတယ်။ တလောက Opera house မှာ သီချင်းသွားဆိုဖို့ ကျောင်းမှာ အရွေးခံရလို့ သားက သားသီချင်းတိုက်နေတော့ သူ့အဖေက သံစဉ်မမှန်လို့ ဆိုပြီး အသံဆွဲတာ မှားနေတယ် ဒီနေရာမှာ ဒီလိုဆွဲရတယ်နဲ့ ဆရာလိုက်လုပ်ပြီး သံစဉ်မမှန်လို့ ကဲ့ရဲ့ခဲ့တယ်။ အခု သူ့အဖေက နှစ်စဉ် လုပ်နေတဲ့ နာဂစ်ရန်ပုံငွေပွဲလုပ်ဖို့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းတိုက်နေတော့ သူ့သားက ပြင်းစရာ သီချင်းလို့ ပြောပြီး ပြန်ကဲ့ရဲ့တယ်။ ကျွန်မကတော့ ဘယ်ဘက်မှ မလိုက်ဘူး သားဆိုတဲ့သီချင်းကို ကောင်းမကောင်း ဝေဖန်လို့ မတတ်ပေမဲ့ ကျောင်းက ကျွန်မသားကို မကောင်းပဲနဲ့ ရွေးပါ့မလားလို့ပဲ သားဘက်က ၀င်ပြောပေးတယ်။ သူ့အဖေ ဆိုတာကိုတော့ နားထောင်တတ်လို့ သားအဲဒါ မြန်မာသံစဉ်ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ဆိုရတယ် ဖေဖေဆိုတာ ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောပေးပါတယ်။
ကိုခိုင်ရေ သားကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ မချစ်ကြည်အေးရေးထားတာက လွဲလို့ကျန်တာ အားလုံးဖတ်ပြပါတယ်။
September 4, 2010 at 6:42 PM Reply
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကဗျာ အရေးအသားက ရှင်းလင်းပြီး ကောင်းလှပါတယ်။
September 5, 2010 at 2:21 PM Reply
4 Sep 10, 13:49
ခြင်္သေ့တယောက် တချိန်လုံး လူတကာကို ပြစ်တင်ရှုပ်ချနေရာကနေ ဒီတခါ ရှားရှားပါးပါး Appreciation လေး တခါ လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတာ တခြားသူတွေပါ သိအောင် မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲ ခြင်္သေ့ရေ။
ကိုဂျူလိုင်က ကဗျာတွေ အားလုံးကို ဆိုလိုတာလား အခုသားရေးထားတဲ့ ကဗျာကို ဆိုလိုတာလား၊ ဘယ်ကဗျာကို ပြောတာလဲ။
September 8, 2010 at 3:52 PM Reply
အပြာရောင်နဲ့ တပိုဒ်ကို ထပ်ဖြည့်ထားတာ ဖြစ်ပြီး သားတို့ကျောင်းမှာ လုပ်မည့် ၀မ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားလုပ်ရင် သားက သူ့ကဗျာကို ရွတ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
September 9, 2010 at 1:35 PM Reply
်gun, lung , numb, young
rhyme တွေရော metaphor တွေရော အရမ်းလှတယ်ဗျာ။ ကလေးက တော်လိုက်တာ။
September 9, 2010 at 3:23 PM Reply
I carry only one comment (which means I can understand only one) , the rest are in Burmese so I don't understand. That is why my mum/mom has to translate for me. And thank you for your great comments, but beileve me, im better than this.
September 10, 2010 at 3:46 AM Reply
You have talent in poetry. Keep it up. Who dares deny that you might one day becomeaworld-famous Burmese poet?